Isilomo seGenerations sikhonjwa kwiThe Queen
URAPULANA Seiphemo noConnie Ferguson sebezobonakala kwiThe Queen sebeyinja nekati Isithombe: SITHUNYELWE
INTATHELI YESOLEZWE | May 22, 2020
INTANDOKAZI yomdlalo wethelevishini owuchungechunge, iThe Queen, iphinde yabamba esinye isibhuklabhukla senhlanzi. URapulana Seiphemo, onguTau Mogale kwiGenerations The Legacy, ngomunye wabalingisi abasha abazobonakala kulo mdlalo kwisizini yesihlani.
Le nkunzi emidwayidwa izobe ilingisa indawo kaHector Sebata, okuyimpisi ezobe imbethe isikhumba semvu, kulo mdlalo okhonjiswa kuMzansi Magic phakathi nezinsuku ngo-9 ebusuku nangoMgqibelo kusukela ngo10 ekuseni.
UHector yinsizwa enesisoka nogazi ezokuba yiphela endlebeni emndenini kaHarriet Khoza. Ababukeli balo mdlalo bazoqala ukumbona ngoJulayi, lapho kuzobe kuqala khona isizini entsha.
Owumqondisi wezinhlelo zakuleli zezokungcebeleka kuM-Net, uNomsa Philiso, uthe iThe Queen izoqhubeka lapho igcine khona ngokujabulisa ababukeli bayo ngabalingisi abayizihlabani nabayizintandokazi emidlalweni yakuleli.
"Abantu bazohlala bebambe ongezansi ngenxa yeziqephu zayo ezinesiphetho esingaqageleki. Izobe inezigameko ezikwenza uhlale ulangazelele isiqephu esilandelayo. Ukuxoxwa kwezindaba zakuleli okungungqaphambili," kuphetha uNomsa.
URapulana ujoyine abanye abalingisi abasha abangaconsi phansi kuleli futhi abanamava abanjengoMenzi Ngubane onenguJudas Ngwenya kwiSibaya, uJessica Nkosi obenguQondisile Buthelezi-Ngubane kwiSibaya, uKuli Roberts noSK Khoza obenguShaka Khoza, osekhuza ibuya kulo mdlalo.